Umkhankaso wokuthatha ikhefu otshwaleni | Isolezwe
Umkhankaso wokuthatha ikhefu otshwaleni
Izindaba / 6 September 2018, 3:22pm / LUNGI LANGA
KUGQUGQUZELWA abantu ukuthi bangenele umkhankaso wokuthatha ikhefu ekuphuzeni utshwala.
UNkk Janet Gourand wenhlangano egqugquzela abantu ngokubaluleka kokuzithiba ekuphuzeni utshwala, iWorld Without Wine, uthe bafisa ukubona abantu bengenela umkhankaso wabo wokugqugquzela abantu ukuthi behlise ophuzweni, iSober Spring Challenge.
Uthe uqale ungumkhankaso wokuqala konyaka iSober January Challenge - ngokuhamba kwesikhathi abantu babacela ukuthi baphinde baqhubeke nokubasiza ukubakhuthaza. Abantu abasuke bengenele umkhankaso bathola imiyalezo ebakhuthazayo nsukuzonke bathole nokunye ukwesekwa.
Umkhankaso ugxile ekunikeni abantu umdlandla wokuthi baqale ukwehlisa ukuphuza utshwala, ugcine usize abanye ekutheni bayeke.
UNkk Gourand uthe njengoba benza umkhankaso wentwasahlobo bazokwenza imikhankaso emibili - omunye sewuvele uqalile. Olandelayo kulindeleke ukuthi uqale ngoSepthemba 23 kube ngoNovemba.
“Uma abantu bephuza bayaye bazitshele ukuthi benza into ehlukile kulena okufanele bayenze bese bebona engathi benza into engcono. Abantu bazitshela ukuthi ngeke bajabule bengazange baphuze utshwala, into engelona iqiniso,” kusho uNkk Gourand.
Uthe abantu benza izinto eziningi ezibeka impilo yabo nalabo abasondelene nabo engcupheni ngenxa yotshwala.
“Utshwala bubulala abantu ukudlula ezinye izidakamizwa ezikhona kodwa abuthathwa njengesidakamizwa esiyingozi. Ucwaningo olusanda kuvela kuThe Lancet lukhombisa ukuthi baningi abantu abashona ngenxa yotshwala futhi abanye bangenwa yizifo okubalwa kuzo umdlavuza ngenxa yawo,” kuqhuba uNkk Gourand.
Ucwaningo lweThe Lancet olusanda kwethulwa lukhombise ukuthi balinganiselwa ku-2.8 million abantu abashona ngenxa yezinkinga zezempilo ezidalwa ukuphuza utshwala emhlabeni wonke. Luveze ukuthi abanye balabo abashona ngenxa yotshwala balimala ezingozini zomgwaqo.
Kuthiwa abantu abafisa ukungenela umkhankaso wentwasahlobo wokuthatha ikhefu ekuphuzeni utshwala bangabhalisa kuwebsite i-www.worldwithoutwine.com kusuka manje kuze kushaye uSepthemba 22 nonyaka.
UNkk Gourand uthe uma abantu bebhalisela ukungenela umkhankaso bazokhokha imali yokubhalisa ezonikelelwa umkhankaso we-Earth Child wokufundisa izingane iYoga ezikoleni ezahlukene kanye nokuqhuba eminye imikhankaso.